အကြွေစေ့ဆဲလ်ဘက်ထရီများအတွက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ခြင်း - သတင်း - DongGuan KeYu Plastic Hardware Co. , Ltd
ကောင်းစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်coin ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူလွယ်ကူသောဘက်ထရီအစားထိုးရန်လုံလောက်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနေစဉ်တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်တုန်ခါခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြင်ဆင်မှုသည်ပိုဆိုးသော disassembly နှင့်ညီမျှသောကြောင့်ဤစံများသည်မကြာခဏဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်လိုင်းတွင်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူများကိုစမ်းသပ်ရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ အကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူသည်သင်၏လက်၌ရှိလျှင်ဘက်ထရီကိုဖြုတ်။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အိမ်များဖြင့်ဝန်းရံထားသည်။
အကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူများ are wildly used in micro electronic devices industry. Our coin ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ is strictly pass the verification and test for setup and disassembly, and we have developed our design and process to avoid the risk of invalidation.
Keyu အမှတ်တံဆိပ် AA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်စီးရီး၌ရှိသည်
အဝေးထိန်းအတွက် Keyu တံဆိပ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူများ